Ọkachamara Semalt: Ihe SEO Ihe Ndị Na-akpata Na-akpata Karịa Mkpụrụ
Nyocha kachasị mma dabeere na isiokwu dị iche iche na otu weebụsaịtị jikọta ha maka ntanetịime na njikwa kachasị. Iji okwu okwu bu ihe di mkpa nke usoro SEO. Ọ bụrụ na eji dị ka ihe dị mkpa nke atụmatụ, ọ nwere ike mgbe ụfọdụ rụọ ọrụ megide marketer. Iji oke okwu eme ihe nwere ike iduba ya na penalization, ma ọ nwere ike iwepụ ya onye na-arụ ọrụ na ha site na ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ilekwasị anya n'ihe ndị ọzọ kachasị mma na ebe nrụọrụ weebụ.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara ,Frank Abagnale na-akọwa ihe akụkụ nke njikarịcha nke kachasị mkpa.
Ntọala ọdịnaya nwere ihe kariri okwu ugboro ugboro
Ọnọdụ nke isiokwu ndị dị na ibe ọ bụla karịrị ihe ugboro ole ha na-apụta. Dịka ọmụmaatụ, nkụnye eji isi mee dị oké ọnụ ahịa karịa ụkwụ, ma ọ bụ n'etiti ọdịnaya nke ogologo oge ọmụma. Ntughari okwu di iche iche na ederede nwere ike igbanwe ogo, ihe ndi ozo, na ihe bara uru nke achotara n'ime uzo ozo.
Nchọpụta Semantic na Nlekọta Onwa
Google agbanweela site na iji mkpirịtaokwu okwu dị ka ngọngọ mee otu nkoo megide ajụjụ gbara ajụjụ. Kama nke ahụ, bọtịnụ ọchụchọ nke Google na-eme ka ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ n'ogologo oge iji guzosie ike nzube nke saịtị ahụ. Ọ na-amalite iji asụsụ mee ihe, na nke abụọ a na ajụjụ ndị dị mkpa, usoro a maara dị ka ụma nyocha. Uru nke ọchụchọ nhazi bụ na ọ dịghị mkpa nke okwu mkpịrịokwu nke otu na-eji ma ọ bụrụhaala na ha dabara na nke azụmahịa..Ndị nwe ụlọ ahịa nwere ike ilekwasị anya ugbu a maka ihe dị mkpa maka azụmahịa na ika ha.
Site na Structure Nsoro
Ibe saịtị kwesịrị inye ndị ọrụ ohere dị mfe na ha ghọta otú e si agba ya gburugburu. Google na-akwado nke a site n'ịhụ na saịtị ahụ dị mfe ịnya ụgbọelu. Ebe nrụọrụ weebụ dị ọcha na nke a haziri ahazi, ya na ụzọ igodo nke doro anya ma dị nkenke nwere ọtụtụ submenus nweta karịa saịtị na njikọ kesara niile interface ahụ. Sitemaps na omenala njikere nhọrọ dị ka Kpọtụrụ, Ihe, na Ọrụ peeji nke bụ ezigbo ego. Njikọ weebụsaịtị adịghị mkpa ma ọ bụrụ na e nwere bụ usoro siri ike na nke a na-ahụghị na ya.
Site Speed ​​na Nche
Mpi na-arịwanye elu na ọtụtụ ohere ngwaọrụ enwetawo na ngwa ngwa, ihe dị elu, inweta ntụgharị ntụgharị. Na-eme usoro usoro nlezianya dị ọcha, na-ebelata nha foto, na iwepụ ihe na-adịghị mkpa Ndị na-ejide onwe ha bụ ụzọ dị iche iche na-eme ka ọsọ ọsọ weebụsaịtị. Nchekwa saịtị na-adịkwa mkpa, na weebụsaịtị ndị nwere SSL ezoro ezo (akpọ https :) na-enwe mmelite na ogo ha. A na-atụ anya uru nchebe saịtị ga-abawanye ka oge na-aga n'ihu.
Nyochaa Nyocha Mkpa bụ ugbu a dị mkpa
Ebe ndị enyi na enyi na-anata ọkwa dị elu ma ọ bụrụ na atụle ya nye ndị na-abụghị. Google weputara mmelite nke na-agbanwezi otu esi edoghi ebe ndi enyi na-adighi. Google na-akwado saịtị ọ bụla ghara izute ọnụ ụzọ. Ọ bụ ezie na a na-arụgharị ebe nrụọrụ weebụ n'ụzọ zuru ezu, ihe Google mere bụ ihe na-egosi ọhụụ ogologo oge ha ọ bụ iji melite ahụmịhe onye ọrụ na ihe na-adịghị mkpa dịka isiokwu.
Dị ka isiokwu si enyere aka n'ịchọta ọdịnaya ma ọ bụ na-asọ asọmpi ohere, ihe àmà na-egosi na iji usoro, nke na-agbaso usoro iwu ederede, abụghị akụkụ dị oke mkpa nke ọrụ. Ihe dị iche iche na-eme ka ahụmịhe ọrụ rụọ ọrụ, na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dị mma, ma nyere aka izere ntaramahụhụ. Dị ka ndị ahịa nke ahụ gosipụtara Ụlọ Ọrụ Ọdịdị Maka Ụlọ Ọrụ , ihe kachasị mma na-eme ka a mara aha gị Source .